चर्चित कलाकार धुर्मुसले सिकाएको समाजसेवा
Tue, Sep 17, 2019 at 6:57pm
सोमबार, ६ जेष्ठ २०७६,	आहाखबर	1.47K
चर्चित हास्यकलाकार सिताराम कट्टेल (धुुर्मुुस) पछिल्लो समय समाजसेवामा समर्पित हुनुभएको छ । बाल्यकालदेखि नै सामाजिक काममा लागेको बताउने धुर्मुस २०७२ सालको भूकम्पपछि खुला रुपमा सामाजिक सेवाको मैदानमा उत्रिनुभयो । धुर्मुस–सुन्तली फाण्डेशनमार्फत उहाँले एकीकृत नमुना पहरी बस्ती, एकीकृत नमुना गिरानचौर बस्ती, एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती, एकीकृत नमुना सन्तपुर बस्ती, वीर अस्पताल सफाई परियोजना सम्पन्न गरिसक्नुभएको छ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र नमुना नेपाल चालु योजनामा छन् । अहिले सम्पूर्ण ध्यान रंगशाला निर्माणमा लगाएको धुर्मुस बताउनुहुन्छ । रंगशाला निर्माणपछि नमुना नेपालको काम अघि बढाउने तयारी फाउण्डेशनको छ । रंगशाला निर्माणको काम तोकिएको समय (२०७७ माघ १६ भित्र) मै सम्पन्न गर्ने दावीका साथ धुर्मश मैदानमा उत्रिनुभएको छ । धुर्मुसलाई धर्मपत्नी तथा फाउण्डेशनकी उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’सहितका अभियन्ताले साथ दिनुभएको छ । २० बिगाहा ८ कट्ठामा निर्माणाधिन रंगशालाको लागत ३ अर्ब अनुमान गरिएको छ । धुर्मुसको समाजसेवा यात्रा उहाँकै शब्दमा ः
समाजसेवामा कलाकारिताको सहयोग
मेरो दिमागमा कलाकारिता मात्र थिएन । चित्र बनाउथेँ, स्केच तयार पार्थेँ । मेरो जन्मभूमिका मानिसले मलाई किताबको रुपमा लिनुहुन्थ्यो र गाउँका भाइबहिनीलाई सितारामबाट सिक भन्नुहुन्थ्यो । म छरछिमेकको पनि काम गर्थेँ । गाउँमा सहयोगी नै थिएँ । कोही विरामी पर्दा अस्पताल पुराउने मै हुन्थेँ । हाम्रो खेत रोपिसकेपछि हलो जोत्न अरुकोमा पनि पुग्थेँ ।
सानैदेखि सामाजिक सोचाइ थियो । काठमाडौँ आइसकेपछि बाच्नका लागि केही संघर्ष गरियो । कलाकारितामा प्रवेश गरेपछि धेरै सामाजिक काम गरेका थियौँ । मृगौला पीडित, बाढिपहिरो पीडितलगायतको लागि निःशुल्क कार्यक्रम पनि गथ्र्यौँ । कुनै दिन देश र समाजका लागि देखिने काम गर्छु भन्ने लागिरहन्थ्यो ।
कलाकारिताले समाजसेवामा ठूलो सहयाेग गर्याे । यदि हामी कलाकार थिएनौँ भने अपिल, अनुरोध, आह्वान गर्दा मानिसहरूको यसरी सहयोग हुँदैनथियो कि ? हामी त अभियानकर्ता हौँ । सहयोगी, शुभचिन्तकहरूबाटै सवै काम सम्पन्न भएका हुन् ।
डालो थापेर पैसाको जोहो
भूकम्प जानुअघि सरकारले हामी (धुर्मुस–सुन्तली) लाई सरसफाइ दूत नियुक्त गरेको थियो । सरसफाइ दूत भएपछि मनमा के लाग्यो भने–‘यो देशमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी मात्रै बहन गर्दै काम गरिदिएको भए मुलुक बन्थ्यो । बन्छ । हामीलाई सम्मान होएन, राज्यले जिम्मेवारी दिएको हो ।’ जिम्मेवारी पुरा गर्न हामी मैदानमा उत्रियौँ । मेची–काली सरसफाइ अभियानमा जुट्यौँ ।
८ महिने छोरीलाई छाडेर देश दौडाहमा गएका थियौँ । बाटोको फोहोर सफा गर्ने मात्र नभइ दिमागी फोहोर पनि सफा गर्ने अभियानमा हामी थियौँ । दिमागको फोहोर हटाऔँ, सकारात्मक सोच राखौँ भनेर बस्तीबस्ती गयौँ । विडम्बना, जिल्ला खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरिएको छ तर राजमार्गमा कहि पनि चर्पी छैन । हामीलाई के लाग्यो भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा प्रत्येक ३० किलोमिटरमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरको रेष्टुरेण्ट बनाउनुपर्छ ।
स्रोत कहाँबाट जुटाउने, क्षमता, योग्यता के हो, सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हामीले हेरेनौँ । त्यही क्रममा अमेरिकामा सरसफाइ सम्बन्धि कार्यक्रम गर्ने कुरा भयो । त्यही सोच लिएर अमेरिका गयौँ । स्टेजमा कार्यक्रम गथ्र्यौँ । अनि सहयोगका लागि डालो लिएर सवैतिर जान्थ्यौँ । कार्यक्रममा एक डालो रकम जम्मा भएको थियो । अभियान सफल हुँदै गएको थियो । त्यति नै बेला नेपालमा भूकम्प गयो । कार्यक्रममा साढे १६ लाख उठेको थियो । आयोजकको ५० हजारसहित १७ लाख रुपैयाँ लिएर हामी नेपाल आयौँ । नेपाल फर्केलगत्तै राहत वितरणमा लाग्यौँ ।
काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ, गोखरालगायत भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका पीडितलाई प्रत्यक्ष भेटेर राहत वितरण गर्यौँ । रातभरी राहत बाढ्यौँ । दोस्रो चरणमा चर्पी निर्माण गर्यौँ । आफैँ खाल्डो खन्न गयौँ, प्यान आफैँले बोक्यौँ । नुवाकोटमा ७ कोठे विद्यालय भवन बनायौँ ।
यसरी बन्यो एकीकृत बस्ती
सिन्धुपाल्चोकको पीपलडाँडामा चर्पी बनाउन जाँदा हातमा प्यान बोकेर उकालो जाँदै थियौँ । कुन्जनाले भनिन् ‘मलाई एउटा कन्सेप्ट आयो–‘हरेक जिल्लाबाट एउटा पीडित परिवार ल्याउने, ७५ वटै जिल्लाबाट ल्याउँदा ७५ परिवार भयो । उनीहरुलाई एकीकृत गरेर एउटै बस्ती बनाऔँ । त्यो देशलाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने ठूलो कडी हुन सक्छ । सवै जातजाती, भाषाभाषीको संगम पनि हुन्छ । त्यहीभित्र विद्यालय, अस्पताल बनाऔँ ।’ मैले भनेँ ‘कन्सेप्ट राम्रो लाग्यो । तर, यसका लागि धेरै रकम लाग्छ, हामी सक्दैनौँ । बरु २०–३० परिवारका लागि एकीकृत बस्ती विकास गरौँ । उहाँहरूको मुहारमा आएको खुसी, उहाँहरूले दिएको आशिर्वाद र सम्पूर्ण नेपालीले दिएको स्यावासीले एकदिन तिम्रो सपना साकार हुन सक्छ ।’ अनि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने शिलशिलामा काभ्रे पुग्यौँ ।
आखिर धनी, गरिव भन्ने नहुँदो रहेछ भनेर मानिसले लोभ गर्न छाडेका थिए । सुरक्षित एकीकृत बस्ती बनाउने भन्दा जसले पनि जग्गा दिने स्थिति थियो । एउटै डिजाइनका घर बनाउन सक्ने अवस्था थियो । सरकारले बनाएको नक्सा र तोकेको मापदण्डमा घर निर्माण गर्न सकिने प्रसस्त आधार थिए । एउटै डिजाइनका, हुबहु, सवै सेवा सुविधा एकै ठाउँमा पुर्याउने गरी बस्तीलाई जोड्नुपर्छ भन्ने लागेर एकीकृत बस्ती बनाउने अभियान अगाडि बढायौँ ।
मार्छौ भनेर पनि आए
बस्ती निर्माणको क्रममा समाज विगार्न आएको भन्ने आरोप पनि लाग्यो । घर नजिकै हुँदा, बाझाबाझ हुन्छ, हानाहान हुन्छ । टाढा घर हुँदा आत्मियता हुन्थ्यो । घर नजिक भएपछि आत्मियता हुँदैन । एकीकृत बस्ती बनाउन नदिन चलखेल पनि भए । रकम हामीसँग थिएन, अरुमै भर परेका थियौँ । धुर्मुस–सुन्तलीले करोडौँ रकम उठाउँछन, अलिअलि देखाउने काम गर्छन अनि बाँकी खान्छन भन्ने आरोप पनि लाग्यो ।
नकुम्ल्याउने भए किन भारी बोक्थे, खाल्डो खन्थे, प्यान बोक्थे सम्म भने । हामीले निस्वार्थी भावले काम गरेका कारण यस्ता कुरा सुन्दा आनन्दै हुन्थ्यो । किनकी राम्रो गर्ने मानिसको खुट्टा तानिन्छ भन्ने हामीलाई राम्रैसँग थाहा थियो । समाज र राष्ट्रका लागि काम गर्न निस्केकाले जस्तोसुकै आरोप, अप्ठ्यारा पनि खेप्न तयार थियौँ ।
काभ्रेको बस्ती वर्षाकै बेला निर्माण गरेका हौँ । सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा पनि वर्षाकै बेला निर्माण भएको हो । पानी पर्ने, आधीबेहेरी चल्ने हुन्थ्यो । टहराहरू हुरीबतासले सवै मिल्काइदिन्थ्यो । पानीमा भिजेर रातभर बसिन्थ्यो । टन्टलापुर घाममा ढुंगै बोकेको हो, इट्टै बोकेको हो, बालुवा नै फिटेको हो । पसिनैपसिना हुन्थ्यो । परेर इन्जिनियर भइयो । बाघसँग पनि संघर्ष गरियो । बाइकबाट लडियो पनि । कोही त खुकुरी नै बोकेर आउथे । खुकुरीसँग कति चोटी खेलियो । कतिपय त मार्छौ भनेर पनि आए । हामी थाक्यौँ भने देशमा धेरै चिज थाक्छ भन्ने भावना मनमा आयो । थप उर्जासहित हामी काममा निरन्तर लाग्यौँ । पीडितको नाममा आएको पैसा बाढौँ है भन्ने प्रस्ताव पनि आउथे । रगत, पसिना बगाएर कमाएको पैसा पीडितलाई सहयोग गरेको छ । त्यो बाढ्ने प्रस्ताव आएपछि कसरी देश बन्छ । त्यो प्रस्ताव मैले सुन्नै मानिन् । काम गर्ने क्रममा सवैभन्दा ठूलो कुरा धेरै सिकियो ।
आट्यौँ, पुग्यो, फेरि आट्यौँ
हाम्रो लागि घर बनाउन लागेको होइन । जसको अव केही पनि छैन । सवै सिध्याइयो । मैले आजसम्म कमाएको ख्याती र विश्वासले रकम जुट्ला भन्ने थियो । त्यतिबेला ५ करोडको काम आँट्दा अहिले ५ अर्वको आँटेको जस्तै भएको थियो । घरभित्रै समस्या होला जस्तो थियो । एक लाख ७४ हजार पैसा हुँदा गिरानचौर आँट्यौँ । खल्तीमा एक रुपैयाँ नहुँदा साढे ६७ लाखको काभ्रे आटेका थियौँ । कलाकारिताबाट कमाएको साढे १९ लाख पैसा समेत खर्चिएको हो । ७७ दिनमा एउटा बस्ती बनायौँ । ७–८ महिना बित्यो । तर पुनर्निर्माण नभएपछि फेरि हामी नै तात्यो ।
एक लाख ७४ हजारबाट सुरु गरेको गिरानचौर बनाउँदा ६ करोड १७ लाख पुग्यो । सद्भाव बाड्नुपर्छ भनेर तराई पुग्यौँ । यही विश्वासका साथ करोडबाट अर्व आँटेका छौँ । यो काम (रंगशाला निर्माण) पनि तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न खटिएका छौँ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई कम गरिन्छ : मन्त्री लेखबहादुर थापा
प्रदेश नं १ सन् २०२५ भित्र बालविवाहमुक्त प्रदेश बन्ने !
बिपी विचार राष्ट्रिय समाजको जापान शाखा गठन
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर झापामा एक हजार बढी प्रहरी परिचालन
रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन १६ केन्द्रीय सदस्यले बुझाए पत्र
जागरण अभियानमा शीर्ष नेताको सक्रियता, मुलुकभर सञ्चालन
३ प्रतिशतमात्र काम बाँकी भनिएको मेलम्चीका प्रमुख किन फेरिए रातारात ?
कपिलवस्तु घटनाका पीडित भन्छन् : न्याय खोज्न कहाँ जाने ?
नेकपामा मधेस मतभेद, कुन गुटमा को ?
प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसक्दा अपेक्षित सफलता भएनः प्रचण्ड
‘दश वर्ष बसेका विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिनुपर्छ’
नेपालगञ्ज घटनाबारे बोल्यो बुद्ध एयर : हुलहुज्जतले विमान नै ढल्किएको थियो
नेपालमा उत्तर कोरियाली लगानीमा प्रतिवन्ध, उद्योग/व्यवसाय बन्द गर्न पत्र
कांग्रेसद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध, तोडियो सहमति !
रिहा भए ज्ञानेन्द्र शाही
विप्लव जिल्ला सेक्रेटरी राई जेलबाटै नेकपामा प्रवेश
सम्झाईबुझाई ज्ञानेन्द्र शाहीलाई छाड्ने प्रहरीको तयारी
अकुत सम्पत्ति छानबिन, उच्च ओहोदालाई हाइसन्चो, खरिदार र सुब्बालाई त्रास
कानुन निर्माणमा प्रदेश सुस्त, बनेका ऐन पनि कार्यान्वयनमा गएनन्
फास्ट ट्रयाकको किनारैकिनार पाइपलाइनमार्फत काठमाडौंमा तेल
तरुण दलमा ‘कु’को नयाँ शैली: अध्यक्षले महासचिव र महासचिवले अध्यक्ष हटाए
पीडक पक्षबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन राहात कोष खडा गर्दै सरकार
डा. गोविन्द केसी सत्याग्रहको तयारीमा, यस्ता छन् एजेन्डा